एमालेलाई ठुलो बनेर बर्चस्व कायम गर्न नभई देश बिकासलागि बर्चास्व चाहिएको छः अध्यक्ष ओली Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
इसीमाना सम्वाददता २०७८ कार्तिक १५ गते ०५: ४७ मा प्रकाशित 120 पटक पढिएको
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउनकालागि आफ्नो पार्टीलाई बहुमत चाहिएको बताएका छन । नेकपा एमालेको भरतपुर महानगरको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ठुलो बनेर बर्चस्व कायम गर्न नभई देश बिकासलागि बर्चास्व चाहिएको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले देशको ठुलो पार्टी बनाउन होइन देश बनाउनकालागि बहुमत चाहिएको बताए । उनले परिर्वतन ल्याउन र देश बनाउन बहुमत चाहिएको प्रष्ट पारे । प्रतिगामीको आरोप लागेका ओलीले प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनबाट प्रतिगमनलाई तोडेर अगाडि बढ्ने संकल्प एमालेको संकल्प सार्वजनीक गरे ।
देश बनाउने नीति एमालेसंग मात्र रहेको अध्यक्ष ओलीले दावी गरे । उनले भने देश बनाउने पार्टी नेकपा एमाले मात्र हो ।
हजारौ जनताको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा उनले नागरिकलाई प्रश्न गरे कांग्रेसले देश बनाउने कुरा गरेको कहिल्ये सुन्नुभएको छ ? ।
एमालेबाट चोइटिएको पार्टीले एकीकृत समाजवादी नाम राखेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भने बिचारले दक्षीणपन्थी नेतृत्व अवसरवादी ।
ओलीले भरतपुरमा पुगेर चितवन रामजन्मभूमि भएको दोहर्याएका छन । अध्ययन गर्दै जाँदा चितवन रामजन्मभूमि भएको उनले बताए ।
एमाले नेता प्रभु साहको ओलीलाई निस्वार्थ साथ
एमाले नेता प्रभु साहले अध्यक्ष ओली जिउँदो हुँदासम्म आफूले साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । चितवनमा एमालेको भरतपुर महानगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता साहले भने– ओली अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्नुहुनेछ । उहाँ जिउँदो हुँदासम्म निस्वार्थ साथ दिनेछु, देशको सपना पूरा गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ ।
महाधिवेशनमा चितवनले आफ्नो तागत प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै चितवनका नागरिकले कम्युनिष्टको भोट लिएर कांग्रेसलाई दिनेहरुलाई सजाय दिनुपर्नेमा साहले जोड दिए ।
उनले विगतको निर्वाचनमा भएको क्षतिपूर्तिसहित आगामी निर्वार्चनमा प्रदेश नम्बर २ एमालेमय बन्ने दावी गरे ।
कार्यक्रममा चितवनमा २६ वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार वीरेन्द्रमणि पौडेल एमाले प्रवेश गरेका छन्। उनी नारायण टुडेका प्रकाशक तथा सम्पादक हुन् ।